အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် စက်ရုံ - MELONTEL
ဖိုင်ဘာ အမြင် ဂိတ် သတျတော
ဖိုင်ဘာ အမြင် Patch ကြိုး
ဖိုင်ဘာ အမြင် မြန် Connector
ဖိုင်ဘာ အမြင် Attenuator
STB module စီးရီး
၃ မီတာ၊ STG နှင့် အခြား module တွေ
ဖိုင်ဘာ အမြင် Tool ကို
အမြင်ဆိုင်ရာ ကိုက်ညီမှု ဂျယ်
ဖိုင်ဘာ အမြင် Splicing Tool ကို
ဖိုင်ဘာ အမြင် စမ်းသပ်သူ
အမြင်ဆိုင်ရာ သန့်ရှင်း Tool ကို
ကွန်ယက် Tool ကို
ကွန်ယက် ခလုတ် Tool ကို
လာကြတယ် Down ကိရိယာများ
စက်မှုလုပ်ငန်းများ & လျှောက်လွှာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖိုင်ဘာ အမြင် > ဖိုင်ဘာ အမြင် ဂိတ် သတျတော > အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော
12 Core ဂိတ် သတျတော
24 Core ဂိတ် သတျတော
16 Core ဂိတ် သတျတော
48 Core ဂိတ် သတျတော
အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အမြန်အသေးစိတ် မူရင်းအရပ် - Zhejiang, China (Mainland)တံဆိပ်အမည်: Yuhuiပုံစံနံပါတ်: YH-1067-8ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 8 core FTTH Termianl boxအမျိုးအစား: အပြင်မှာ & မိုးလုံလေလုံပစ္စည်း: SMCအရွယ်အစား: 235x200x60mmစွမ်းဆောင်ရည်: 1pcs 1:4သို့မဟုတ် 1: 8 PLC splitterအရောင်: Greyoperating အ......
မူရင်းအရပ် - Zhejiang, China (Mainland)
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 8 core FTTH Termianl box
အမျိုးအစား: အပြင်မှာ & မိုးလုံလေလုံ
စွမ်းဆောင်ရည်: 1pcs 1:4သို့မဟုတ် 1: 8 PLC splitter
operating အပူချိန်: -40âမှ + 80â "မှ
အလေးချိန် 0.8kg / pcs
အထုပ်: 1 pcs / box ကို
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် 1pcs / အိတ်
8 Core FTB အပြင်ဘက် Fiber Optic Terminal Box IP65 Plastic SMC FTTH Box PLC Splitter
၁။ အနှစ် ၂၀ ကျော်ဘဝကိုအသုံးပြုပြီး၊ အမေရိကန်မှ SMC ပစ္စည်းကိုသုံးပါ
2. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်: IP65 ။
၃။ ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက်ရေစိုခံသောဒီဇိုင်း၊ သော့ခတ်ထားခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်များကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊
၄ ။ ပိုမိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အလွှာနှစ်ထပ်ဒီဇိုင်း
၅။ အရွယ်အစား - ၂၃၅ မီလီမီတာ x ၂၀၀ မီလီမီတာ x ၆၀ မီလီမီတာ
၆။ FTTH ကျဆင်းမှု ၈ ခုအထိ 1pieces 1x4 or 1x8 PLC splitter ကိုချထားပါ
၇။ တပ်ဆင်ခြင်း - Wall Mounting သို့မဟုတ် Pole Mounting ။
2.2ဝင်ပေါက်ဆိပ်ကမ်းများနှင့် 8 ထွက်ပေါက်ဆိပ်ကမ်းများ။ 8 FTTH ကျဆင်းမှုအထိ, 1 အပိုင်း 1x8 PLC splitter သို့မဟုတ် 1piece 1X4PLC splitter ထားရှိရန်
၃။ ရေအပြင်ပိုင်းနှင့်အိမ်တွင်းအသုံးပြုမှုအတွက်ရေလုံသည့်ဒီဇိုင်း၊ IP65 ။
4. သော့ခတ်, အသုံးပြုရန်လုံခြုံ
5. Wall နှင့်တိုင် mountable
7. အရွယ်အစား: 235mm x 200mm x 60mm
8. အလေးချိန်: 0.8kg
အပူချိန်: -40 ° C မှ60ÂC
စိုထိုင်းဆ: ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၉၃% ရှိသည်
လေဖိအား - ၆၂kPa - ၁၀၁kPa
FTTx, FTTH, FTTB, FTTO, Telecom ကွန်ယက်၊ CATV ။ အတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်ကြိုးဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် optical cable များအတွက်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းကိရိယာ။
အေးမြသောသံမဏိသေတ္တာများအတွက်, ABS ဗန်းများအတွက်
-40Â° C ~ + 60Â° C
<၉၅% (+ ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)
â 2x10MM © / 500V (DC)
16 FTTH ကျဆင်းမှုအထိ 2pieces 1x8 PLC splitter သို့မဟုတ် 1piece 1X16PLC splitters ထားရှိပါ။
Installation Method ကို (အလွန်တရာမှ)
ကြမ်းပြင်မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ နံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ တိုင်တိုင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်သိမ်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ စင်္ကြန်သည်ကက်ဘိနက်၌တပ်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်
hot Tags:: အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော, တရုတ် အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော, အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော စက်ရုံ, အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော ထုတ်လုပ်သူများ, အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော ပေးသွင်းသူများ, အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော စျေးနှုန်း, ဝယ်ပါ အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော, စိတ်ကြိုက် အပြင်ဘက်မှာ PLC သတျတော
8 Core အပြင်ဘက်မှာ ဖိုင်ဘာ အမြင် ဂိတ် သတျတော
ဖိုင်ဘာ အမြင် ပူးတွဲ
96 Core ဂိတ် သတျတော
လိပ်စာ: # ၁၈ ဟူဂျီယန် PENGNAN, Henghe, CIXI, နင်ဘို, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: +86 15669228711
ကြိုဆိုပါတယ် ရန် ငါတို့ ဝဘ်ဆိုက်! ကျေးဇူးပြု ခံစားမှု အခမဲ့ ရန် ပို့ပါ yငါတို့ စုံစမ်းရေး ရန် ငါတို့ က က အောက်ပါ ပုံစံ, ငါတို့ အလိုတော် ဆက်သွယ်ရန် မင်း အဖြစ် မကြာမီ အဖြစ် ဖြစ်နိုင်တယ် နှင့် ကမ်းလှမ်းချက် မင်း က သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ။
ကိစ္စရပ်များ လိုအပ်နေတယ် အာရုံစူးစိုက်မှု in အမြင်ဆိုင်ရာ ဖိုင်ဘာ ကေဘယ်လ်2019/12/04
The အရာ အကြောင်း က ဝါယာ သတျတော in က ကွန်ယက်2019/12/04
မူပိုင်ခွင့် @ 2017-2018 Ningbo Melontel ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ အားလုံး အခွင့်အရေး ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသည်